Curaçao inovhura kuNew York, New Jersey uye vagari veConnecticut chete
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Curacao Kuputsa Nhau » Curaçao inovhura kuNew York, New Jersey uye vagari veConnecticut chete
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Curacao Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Mushure memwedzi yekutarisira, iyo Curaçao Yevashanyi Bhodhi yakashinga kuzivisa muganho kuvhurwazve kune vagari veNew York, New Jersey uye Connecticut. Kutanga svondo rekutanga raNovember, vagari venzvimbo nhatu dzambotaurwa vachange vari vekuAmerican vekutanga kupihwa mukana wekuwana kune zuva reDutch Caribbean chitsuwa cheCuraçao kubvira pakatemwa mafambiro kutanga kwegore rino.
Vasati vasvika, vese vashanyi vanofanirwa kupa humbowo hwezvakaipa Covid-19 PCR bvunzo mhedzisiro yakatorwa mukati maawa makumi maviri nemaviri ekufamba. Kugadzirisa maitiro ekupinda, vashanyi vanozopedzisa iyo Dhijitari Yekupinda Kadhi pa www.vashorganism.ru, rova ​​mhedzisiro yavo yakaipa kune iyo portal, uye zadza iyo Passenger Locator Kadhi (PLC) online mukati maawa makumi mana nemasere vasati vaenda. Uye zvakare, vagari veNew York, New Jersey neConnecticut vanofanirwa kupa ID chaiyo-yakapihwa ID sehumbowo hwekugara.
Ndege dzisiri-dzekumira kubva kuNewark Liberty International Airport (EWR) dzichatangazve Mbudzi 7 nebasa revhiki nevhiki rinopihwa kuUnited. Mwedzi unotevera, JetBlue ichapa kaviri pavhiki nendege kubva kuNew York's John F. Kennedy International Airport (JFK) kutanga Zvita 9.
New York, New Jersey neConnecticut ikozvino vabatana neCanada uye mimwe misika ine njodzi- nepakati ine njodzi yakabvumidza kupinda muCuraçao, ichangodaidzwa kuti chimwe chezvitsuwa zvakanakisa muCaribbean muCondé Nast Traveler's 2020 Readers 'Choice Awards. Iyo Curaçao Yevashanyi Bhodhi - mukubatana ne Ministry of Veruzhinji Hutano, Iyo Nharaunda & Zvisikwa, pamwe ne Ministry of Economic Development - inotsanangura yakaderera- uye yepakati-ine njodzi misika zvichienderana nenhamba dzichangoburwa uye manhamba kubva kumusangano wega wega wedunhu wakasarudzika nzira.
"Mushure mekukurukura nesainzi nenzvimbo inoremekedzwa yechiremba muNetherlands uye pachitsuwa ichi, takatora danho rekuvhura zvishoma nezvishoma indasitiri yekushanya yeCuraçao kuUS," anodaro Paul Pennicook, CEO weCuraçao Tourist Board. "Zvinhu zvakawanda zvakatariswa kusanganisira nyaya dzazvino, kukwira ndege uye kukanganisa hupfumi hwenzvimbo, pakati pezvimwe."
Mukuedza kuchengetedza nharaunda nepasirese nharaunda kuchengetedzeka, kutanga kwegore rino Curaçao yakateedzera seti yemitemo yehutano nekuchengetedza, yakanzi "A Dushi Stay, iyo Hutano Way" - dushi zvichireva "inotapira" muPapiamentu. Chirongwa chakazara chinosanganisira zvese kubva pakudzidziswa kwevashandi uye maitiro matsva ekuparadzanisa magariro kune hutsanana uye nhungamiro yetsvina. Iyo yakasarudzika yekutarisa system inotungamirwa nehofisi yechipatara yehutano hofisi inosanganisirawo yakasarudzika nhare kune vese vanouya vashanyi panguva yavo muCuraçao.
Pamusoro pezvo, kuti ibatanidze ruzivo rwese rwakakodzera, bhodhi revashanyi rakagadzira chikumbiro chemafoni chinonzi "Dushi Gara." Imwe yemapurogiramu ekutanga erudzi urwu, Dushi Gara inopa vafambi mukana wekupinda zvinodiwa, zvitsuwa zvitsva-zvitsuwa, manhamba ekukurumidzira uye matipi ehutano, pamwe neresitorendi yakavhurika, zvinokwezva, mahombekombe, nezvimwe zvese pamunwe wavo.
"Ticharamba tichinyatso tarisa zviri kuitika muUS yese," anowedzera Pennicook. “Sezvo takanakidzwa nekukura nemadhijiti kaviri kubva kumusika weUS mumakore mashoma apfuura uye maUS anoverengera chikamu chakakura chevashanyi vekuCuraçao, tinotarisira kuvhurwa kwemamwe maguta masuwo mamiriro ezvinhu paanobvumidza kuti maAmerican ndinogona kuramba ndichiona nzvimbo iyi inoshamisa. ”